Koox lala xariirinayo Al-Shabaab oo weerar jid gal ah ka geystay G/Waqooyi Bari – Hornafrik Media Network
Koox la rumaysanyahay inay ka tirsantahay Al-Shabaab ayaa waxaa ay weerar sababay khasaare isgu jira dhimasho iyo dhaawac ka fuliyeen duleedka magalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya.
Weerarka ayaa yimid, kaddib markii dabley hubeysan ay wadada u gashay rasaasna ku furtay gawaari ay leedahay shirkad ka shaqeys qaadista qashinka oo laga leeyahay dalka Kenya, waxayna wararku sheegayaan in gaarigaasi uu ka baxay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, isla markaana uu kusii jeeday magalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari.
Maamulka isbitaal ku yaalla magaalada Mandheera ayaa sheegay in lasoo gaarsiiyey meydka hal ruux iyo dhaawaca labo kale, waxayna wararku intaas ku darayaan in gaariga kolkii hore ay haleeshay miino wadada lagu aasay, kadibna ay xigtay rasaas iyo weerar toos ah oo lagu qaaday.
Sarkaal u hadlay Booliska Kenya ayaa sheegay in weerarkaas ay ka dambeeyeen Al-Shabaab, isla markaana ay doonayeen inay laayaan dadkii la socday gaariga balse darawalka waday gaariga oo lagu magacaabo Derrow Hillow Mahad uu si xowli ah u waday, sidaasna ay dadka kale uga badbaadeen kooxda hubaysan.
Wargeys Turkish ah oo sheegay in Imaaradka ay ‘fuliyeen’ qaraxii Ex-kontorool ee Muqdisho